. Aka.ms/RemoteConnect】Minecraft Remote Unganidzo / Microsoft Minecraft Gadzirisa nyaya
Kurume 1, 2021 na Nhungamiro Yedzidziso Siya Revo
1.1 Ungapinda Sei & Kunze kuMicrosoft, Gadzirisa Zvikanganiso, Chinja Gamertag:
2.1 Maitiro ekugadzirisa iyo Xbox Crossplay kukanganisa?
2.2 Maitiro ekugadzirisa PS4 (PlayStation4) Crossplay kukanganisa
2.3 Maitiro ekubatanidza yako Microsoft account kune Minecraft PS4 uye Xbox!
2.4 Vhidhiyo Tutorial,
2.5 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Munguva pfupi yapfuura mutambi wese weMinecraft akatarisana ne https://Aka.ms/remoteconnect dambudziko pavanopinda mukati. Saka, pano ini ndine mhinduro kune iyo Minecraft Remote-Unganidzo kukanganisa. Pano ndiri kuedza kutsanangura “Ndeipi iri kure yekubatanidza kukanganisa” uye “Iwe unogona sei kugadzirisa iyo Minecraft Remote Unganidzo nyaya.”
The aka.ms/remoteconnect yakakoshawo kune veMinecraft Vatambi, Nekushandisa iyo Aka.ms Remote Unganidzo iwe unogona kuwana yako Minecraft Akaunti pane yega chishandiso kana iwe uine. akakurumbira Minecraft mutambo pane iyo online iyo https //aka.ms/remoteconnect Microsoft Minecraft nyaya. Iyo yekukanganisa link inouya kune yako skrini.
Aka.ms/remoteconnect ndeye Minecraft bug, Dambudziko iri rinokuratidza paunopinda muine Minecraft neMicrosoft account. Paunoshandura chishandiso cheMinecraft, wozoona izvi Aka.ms/remoteconnect kukanganisa. Kunyanya vanhu vanochinjisa iyo Minecraft muNintendo kuenda kuMicrosoft uye chero mamwe majaira, ipapo unotarisana ne Aka.ms/remoteconnect zvakafanana sezvaunoshandura kubva kuPS4 uchienda kune chero mimwe michina.
Chii https://aka.ms/remoteconnect kukanganisa?
Aka.ms/remoteconnect kukanganisa kwakajairika paunoyedza kutamba neAccount yako yeMicrosoft. Minecraft ichangosvika papuratifomu yeMicrosoft. Saka tinoziva kana paine dambudziko. Pano isu tichataura nezve maitiro ekugadzirisa iro dambudziko. Iwe unotarisana nedambudziko iri kana iwe ukachinja chishandiso cheMinecraft.
Mune kukanganisa uku, unogona kuona kuti iwe unobvunzwa kuisa kodhi yeaka.ms/remoteconnect. Asi iwe hauzive kuti ndeipi kodhi yaunoda kuisa kugadzirisa Aka.ms/remoteconnect. Muchidimbu, iwe unoda account yeMicrosoft kugadzirisa iyi Minecraft crossplay zvinoreva aka.ms/remoteconnect.
Iyi Aka ms remote Connect kukanganisa inogona zvakare kukanganisa yako data yemutambo zvinoreva kuti ungafanira kujekesa yako Minecraft dhata kugadzirisa iri dambudziko. Tiudze kuti ungagadzirisa sei kukanganisa kwepamuchinjikwa uye kugadzirisa kure kure kubatanidza kukanganisa iwe unofanirwa kutevedzera maitiro akapihwa pazasi.
Maitiro ekugadzirisa iyo crossplay kukanganisa kweMinecraft? | Ungagadzirisa sei aka.ms/remoteconnect kukanganisa?
Tiudze kuti ungagadzirisa sei kukanganisa kwepamuchinjikwa uye kugadzirisa kure kure kubatanidza kukanganisa iwe unofanirwa kutevedzera maitiro akapihwa pazasi.
Ungapinda Sei & Kunze kuMicrosoft, Gadzirisa Zvikanganiso, Chinja Gamertag:
Maitiro ekugadzirisa iyo Xbox Crossplay kukanganisa?
Kuti utambe Minecraft uri kure unofanira kutanga wadhanilodha Minecraft imwe vhezheni paXbox, ipapo unogona kutamba Minecraft pane iyo Xbox console
Nhanho 1: Minecraft mutambo wemutambo Unogona kuwana kodhi iri kure nekudzvanya pane iyi link iripazasi. Click on Aka.ms/xboxsetup..
Nhanho 2: Kana mutambo uchinge watanga iwe unozofanirwa kushanyira iyo aka.ms/remoteconnect saiti, enda kune webhusaiti uye unofanirwa kupinda muakaundi yeMicrosoft, kuwana mukana wekutamba uri kure muMinecraft, Ipapo iwe unofanirwa kuisa kodhi pa aka.ms/remoteconnect. Iwe unofanirwa kuisa iyo Remote Code yakapihwa kuXbox Screen.
Aya matanho anoshanda ekufamba uye kushandisa nzvimbo iri kure. Isu tinovimba iyi webhusaiti inogadzirisa dzimwe nyaya dzamuri kutarisana nadzo. Iyi nzira-yakapihwa pamusoro iri kunyatso shandira Microsoft Minecraft. Zvino ngatizivei “maitiro aunogona kuyambuka muPS4 yekutamba kure.”
Maitiro ekugadzirisa PS4 (PlayStation4) Crossplay kukanganisa
Maitiro ese ari maviri akafanana. Iwe unofanirwa kutora nhanho dzakafanana kuti utambe Minecraft Remote muChiteshi Chekutamba 4. Uye iwe unogona zvakare kutevera nhanho dzakafanana kugadzirisa iyo aka.ms/remoteconnect muNintendo.
Nhanho 1: Kutanga Kwazvose, iwe unofanirwa kuvhura iyo Nintendo Chitoro, uye iwe unofanirwa kutsvaga iyo Minecraft Game uye kurodha pasi iyo Minecraft kubva kuNintendo Chitoro.
Nhanho 2: Vhura iyo Minecraft Game.
Nhanho 3: Pashure pazvo, shanyira iyo Aka.ms/remoteconnect webhusaiti yepamutemo, wobva waisa iyo yakapihwa kodhi paNintendo Screen muAka.ms/remoteconnect webhusaiti yepamutemo.
Nhanho 1: Shanyira mukuru PlayStation Chitoro uye uwane iyo Minecraft Mutambo, wobva watora pasi.
Nhanho 2: Pashure pazvo, iwe unofanirwa kuvhura iyo Minecraft mutambo paPS4 ipapo iwe unoratidza iyo yekushandisa kodhi.
Nhanho 3: Iye zvino unofanirwa kushanyira iyo Aka.ms/RemoteConnect yepamutemo webhusaiti uye nyora yakapihwa kodhi pane iyo PS4 skrini pane Remote Unganidzo webhusaiti.
Kuteedzera maitiro akapihwa pamusoro, iwe unogona kugadzirisa zviri nyore matambudziko ecrossplay. Iye zvino unonakidzwa neMinecraft yako mutambo uye unotamba usina kushushikana. Kana Minecraft dhata yakaora, saka, iwe unofanirwa kujekesa iyo yakashata dhata kubva kuMinecraft Kuchengetedza. Kana iwe usingazive sei kujekesa iyo Minecraft yakashata dhata, ipapo iwe unofanirwa kuteedzera iripazasi-yakapihwa maitiro iyo inokubatsira iwe kubvisa iyo yakashatiswa data.
Maitiro ekubatanidza yako Microsoft account kune Minecraft PS4 uye Xbox!
nguva dzese Nzira nyowani dzinoshanda
Maitiro ekujekesa zuva rakaora kubva kuMinecraft?
Vhura iyo Minecraft Game, wobva wavhura iyo Minecraft Setting. Pashure pazvo, tora paSetting Setting. Mushure maizvozvo, dzvanya pane iyo Kuchengeta, wobva wavhura Game Kuchengetedza, yekupedzisira nhanho iwe yaunofanirwa kuita kujekesa iyo mutambo data.
Mhedziso uye Matipi
Paunoshandura iyo Minecraft Akaunti, wobva wanyatso pedzisa maitiro acho. Dzimwe nguva vanhu vaitya kana vawana iyo https://aka.ms/remoteconnect kukanganisa uye havazivi “Zvekuita?”. Saka, pano ndiri kutsanangura zvese zvakakosha zveAka MS Remote Unganidzo.
Rkill For PC Windows 10/8/7 - Yemahara Kurodha Nyowani Shanduro
Dhawunirodha VidMix paPC Ye Window 7, 8 & 10
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime Tagged Na: Aka.ms/RemoteConnect, Microsoft Minecraft Gadzirisa nyaya, Minecraft mitambo inozivikanwa, Minecraft Remote Kubatana